5 အီတလီမှာအံ့သြဖွယ်ကော်ဖီအရောင်းဆိုင်များအနီးရထားဘူတာရုံများ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား >5အီတလီမှာအံ့သြဖွယ်ကော်ဖီအရောင်းဆိုင်များအနီးရထားဘူတာရုံများ
စာဖတ်ချိန်:4မိနစ်များ(နောက်ဆုံးတွင်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 19/06/2020)
အီတလီနိုင်ငံပွဲတစ်ပွဲကိုမြေကြီးပေါ်မှာအကြီးမြတ်ဆုံးကော်ဖီယဉ်ကျေးမှုရှိပါတယ်. အဲဂုတ္တုပြည်ကော်ဖီတင်သွင်းဖို့ပထမဦးဆုံးဥရောပတိုင်းပြည်, အီတလီနိုင်ငံဟာကတည်းကအောင်မြင်သောကဖေးရှိခဲ့ပါတယ် 16ကြိမ်မြောက် ရာစု, ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သင်တို့အပေါ်မှာအကြံပေးပါလိမ့်မယ်5အီတလီမှာရထားဘူတာအနီးအံ့သြဖွယ်ကော်ဖီဆိုင်များ.
သငျသညျအီတလီမှာရထားဘူတာအနီးရှိကော်ဖီရှာနေနေတယ်ဆိုရင်သင်ကံကောင်းပါစေ၌ရှိကြ၏. သူတို့ရဲ့ကော်ဖီနဲ့တူအီတလီခိုင်မာတဲ့နှင့်အစာရှောင်ခြင်းပြသနာတွေ. အဘို့အထို့ကြောင့်သူတို့၏ preference ကို အိတ္စပရပ္ရဲ့ နှင့်အီတလီကိုလည်း cappuccino နှင့် Latt တူသောနို့-based ကော်ဖီအချိုရည်ဖွံ့ဖြိုးဆဲတာဝန်ရှိသည်.
တကယ်တော့, ဥရောပနှင့်အနောက်ပိုင်းကမ်ဘာပျေါတှငျအားလုံးနီးပါးကော်ဖီယဉ်ကျေးမှုအီတလီနိုင်ငံကနေကြွလာ. ကော်ဖီအပေါငျးတို့သမတူညီတဲ့စံအမျိုးအစားများကိုကျနော်တို့ရှိပါတယ်သောက်ရအဘယ်ကြောင့်ဤသူကားအ အီတလီအမည်များ.
ဒါကြောင့်, က Milano Centrale တို့ကိုပြုလုပ်အံ့သြစရာမရှိပါအဖြစ်လာသင့်တယ်, အီတလီနိုင်ငံရဲ့အသက်အကြီးဆုံးနှင့် အလုပ်အများဆုံးရထားဘူတာရုံ အီတလီမှာ, ကဖိန်းဓာတ်ပါသောသောက်စရာများအတွက်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည့်ရွေးချယ်မှုအချို့ကိုဂုဏ်ယူသင့်သည်. 330,000 လူများသည်တစ်နေ့လျှင် Milano Centrale ကိုအသုံးပြုကြသည်. cross-နယ်စပ်ရထား Milano Centrale တို့ကိုထံမှအဓိကရန်ခရီးသည်များယူ ဥရောပခရီးစဉ် ကဲ့သို့ ပဲရစ်, မြူးနစ်, နှင့် ဗီယင်နာ.
https://www။youtube။com/watch?v = yvOKBptYdg4
ဤတွင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထိပ်တန်းရှိပါတယ်5အီတလီမှာရထားဘူတာအနီးရှိသင့်သောကော်ဖီဆိုင်များအဘို့ရွေးခြယ်သော
အီတလီနိုင်ငံအတွက်မီလန်ရထားဘူတာကနေမိနစ်အနည်းငယ် '' လူတန်းစားပေါင်းစုံတည်ရှိပြီးဒီကဖေးတိကျစွာ၎င်း၏အမည်ကိုဖွငျ့ဖျောပွထား. ဒီပျူငှါနွေးထွေးသောသင်တို့သည်စားနေတုန်းကဖီးနှင့်သောက်စရာတဝိုက်လမ်းလျှောက်ကြောင်ရှိပါတယ်. ဤ funky ကဖေးသည်လက်ဖက်ရည်ကြမ်းကိုကြောင်ပုံစံခွက်တွင်အရသာရှိခြင်းနှင့်အရသာရှိလှသည့်ကိတ်မုန့်များသောက်သုံးခြင်းကြောင့်နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားသည်. အဆိုပါဝန်ထမ်းစူပါဖော်ရွေဖြစ်ကြောင်းနှင့်ကြောင်အများစုအမြဲအိပ်ပျော်ကြ, သူတို့သည်ဤလုပ်ဖို့ကြိုက်တယ်ကားအဘယ်သို့.
လိပ်စာ: Napo Torriani မှတဆင့်5| Cappellini မှတဆင့်ထောင့်, 20124 မီလန်
ဤသည်ကဖီးညာဘက်ဘေးနားရှိဘူတာရုံဖို့ဖြစ်ပါတယ်နှင့်မရောက်မှီတိုင်အောင်, ပွင့်လင်းဖြစ်ပါတယ်3နံနက်. နောက်ဆုံးအများအတွက် 87 နှစ်ပေါင်း, လူတို့သည်မိမိတို့ရထား boarding ရှေ့တော်၌အမြန်ကော်ဖီနှင့်သားညှပ်ပေါင်မုရဖို့ဒီမိသားစုကို run နေရာငှါလာကြပြီ. ဤသည်ကဖီး၏ကြီးမားသောရွေးချယ်ရေးဂုဏ်ယူ အလင်းအစားအစာများ ၎င်း၏ကဖေးအပိုင်း၌၎င်း, တစ်ဦးထက်ပိုသောကြော့အတွေ့အကြုံကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ရရှိနိုင်သော, အရသာတာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့စားသောက်ဆိုင်အပိုင်းလည်းမရှိ ပီဇာ နှင့်ခေါက်ဆွဲ. အဆိုပါကဖီးတွင်နေ့လည်စာကာလအတွင်းအလွန်အလုပ်များဖြစ်ပါသည်, ဒါပေမဲ့ဒီ၏အပြင်ဘက်တွင်, ကအပြုံးနှင့်အတူအစာရှောင်ခြင်းဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပါသည်.
လိပ်စာ: Piazza Duca d'Aosta 10 | အဆိုပါ.
Vitruvio မှတဆင့်, 20124 မီလန်
သငျသညျအီတလီကော်ဖီအကြောင်းကိုဤမျှလောက်ကြီးစွာသောသောအရာကိုကြည့်ဖို့ရှာဖွေနေနေတယ်ဆိုရင်, ဒီသွားရောက်လည်ပတ်ဖို့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. ကော်ဖီနှင့်အရသာအိမ်လုပ်မုန်၏ကျယ်ပြန့်ဒီလှည့်ခရီးသည်များနှင့်ဒေသခံနှစ်ဦးစလုံးတစ်ဦးလူကြိုက်များကော်ဖီအစက်အပြောက်အောင်. ဤသည်နံနက်စာရှိသည်ဖို့နေရာကောင်းတခုဖြစ်ပါတယ်နှင့်ယူရိုဒါမှမဟုတ်ဒီထက်နည်းတချို့ကော်ဖီရောင်းချ. ဤသည်ကော်ဖီဆိုင်ဖြစ်ပါသည် ဘီးတပ်ကုလားထိုင်သုံးစွဲနိုင်, WIFI ရှိပါတယ်, ဖြစ် အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်-ဖော်ရွေ နှင့်တစ်ဦးကောင်းစွာ-ကောငျးအလှနျအရက်ဘားခဲ့. ဘူတာကနေတစ်ဦးကခုနစ်မိနစ်လမ်းလျှောက်.
လိပ်စာ: Vitruvio မှတဆင့် 40 | အီတလီမှာတော့မီးရထားဘူတာရုံများ | မီလန် Lombardi
ရောမမြို့ Termini ဘူတာရုံ
သင်သည်လည်းအီတလီနိုင်ငံရောမမြို့ Termini မီးရထားဘူတာရုံမှတဆင့်ခရီးသွားလာနေတယ်ဆိုရင်, ဤနေရာတွင်အချို့သောပိုပြီးရမယ်-အလည်အပတ်ခရီးကော်ဖီဆိုင်များများမှာ.
သငျသညျကွီးစှာသောစျေးနှုန်းမှာမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ကော်ဖီရှာနေနေတယ်ဆိုရင်, ထို့နောက်ဘား Fondi အဖြေဖြစ်ပါသည်. ဤသည်အေးမြဖီးကြီးမြတ်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှဂီတကမ်းလှမ်း, အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အလင်းအစားအစာဖြင့်လိုက်ပါသွား. ခရီးသွားများအတွက်အဆိုပါကြိုးစားနေအကြံပြု pastries. ဤနေရာတွင်အစားအစာနှင့်အချိုရည်မိန့်အစာရှောင်ခြင်းနှင့်သာယာသောလုပ်ငန်းစဉ်တခုဖြစ်ပါတယ်, နှင့်ဖီးခရီးသွားများအတွက်နှင့်ဒေသခံများနှစ်ဦးစလုံးနှင့်အတူရေပန်းစားသည်. (ဒီကဖီး၏စျေးနှုန်းရောမမြို့မှာရှိတဲ့တခြားကော်ဖီဆိုင်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အကြီးအကျယ် bargain ဖြစ်ပါသည်)
လိပ်စာ: Milazzo မှတဆင့် 16, 00185 ရောမမြို့, အီတလီ
ဤသည်အိတ္စပရပ္ bar ကိုရောမမြို့ Termini သုံးပြီးလူတို့အဘို့အလွန်အဆင်ပြေတည်နေရာအတွက်အခြားကော်ဖီဘားဖြစ်ပါသည် ဘူတာရုံ နှင့်အစာရှောင်ခြင်းဝန်ဆောင်မှုကမ်းလှမ်း. အဆိုပါ cappuccinos ဘုရားသခငျ့ဖြစ်ကြပြီးအများအပြားရွေးချယ်မှုကော်ဖီဘို့ရှိပါတယ်, နှင့်ဘလူးဘယ်ရီ muffins လည်းကြီးမားတဲ့ထိခိုက်များမှာ. သငျသညျနှောင်းပိုင်းတွင်ရထားဘို့အပြေးနှင့်အစာရှောင်ခြင်းကော်ဖီလိုအပ်ပါတယ်နေတယ်ဆိုရင်, က Moka ထက်ပိုမိုမြန်ဆန်ရပါဘူး.
လိပ်စာ: Piazza dei Cinquecento | အီတလီမှာတော့မီးရထားဘူတာရုံများ | ရိုးမား Termini, ရောမမြို့
ဒါကြောင့်သင်ကအီတလီမှာတစ်မြို့မှာရောက်ရှိလာမယ့်အချိန်ဘယ်ကြောင့်လည်းအီတလီမှာရထားဘူတာအနီးရှိအံ့သြဖွယ်ကော်ဖီဆိုင်များတဦးသို့ drop မဟုတ်.
Save Train ကိုအသုံးပြုပြီးသင်၏နောက်ရထားခရီးစဉ်ကိုဘွတ်ကင်လုပ်ပြီးအီတလီရှိဘူတာများစွာကိုကြည့်ပါ
သငျသညျအနာဂတျတှငျမီလန်သို့မဟုတ်ရောမမြို့မှခရီးစဉ်စီစဉ်နေပါတယ်? အဘယ်ကြောင့်မယူ3မိနစ်အပေါ်စျေးနှုန်းချိုသာရထားလက်မှတ်တွေတှေ့ တစ်ဦးကရထား Save. ရက်စွဲနှင့်အချိန်အတွက်ဖြည့်ပါနှင့်သင်သွားလာရန်နှင့်ငါတို့သည်သင်တို့၏ခရီးများအတွက်အကောင်းဆုံးဈေးနှုန်းဖြင့်သင်တို့ကိုပေးသွားမှာပါချင်ပါတယ်ထားတဲ့မီးရထားအီတလီမှာဘူတာ, သငျသညျမျိုးစုံနည်းလမ်းတွေထဲမှာအဘို့အပေးဆောင်နိုင်သော.
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, ထို့နောက်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://embed.ly/code?url = https://www.saveatrain.com/blog/coffee-shops-train-stations-in-italy/ - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း)
#ကော်ဖီ မီလန် ဘူတာရုံ travelrome